Ungazenza njani izinto ezingabizi kakhulu zelayini yomatshini wenayiloni zeBosch brushcutters -Ikaro
yokuqalisa >> Ukulungiswa >> Uyenza njani into yokubuyisela umgca wenayiloni ngexabiso eliphantsi kwi-Bosch brushcutters
Ezo zikumfanekiso eziza neendleko zomatshini € 25 ipakethi yeeyunithi ezili-10 ze-30cm Oko kukuthi, i-25 € yeemitha ezi-3. Ngelixa iikhoyili zisibiza nge- € 10 yeemitha ezingama-60 okanye ezingama-70. Umahluko mkhulu.
3mm umsonto wenayiloni
Ukuba unomdla wokwazi Sebenzisa naluphina uphawu lwe-nylon spools Ndikushiya ngeendlela ezimbini.
Sebenzisa kwakhona i-bolt
Ukuba sibona iindawo zokugcina izinto zine-aluminium encinci. Andiqinisekanga ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba sibeka intambo yokusika ngqo. Ngokubona ukuba ifika njani ndicinga ukuba xa inokubanjwa kwenye ingca iyakushibilika ize ishiye intloko. Kungenxa yoko le nto siza kuphinda sisebenzise iibholiti.
Ndishiya ividiyo kunye notshintsho
Ukuba ukhetha ukubona inyathelo ngenyathelo ngenyathelo kunye neefoto, nantsi unayo.
Thatha izikhwenene zempumlo, ususe i-deformation. Ke singafumana intambo eseleyo esisele nayo
Kwaye kufuneka usike entsha, uyibeke ngaphakathi kwaye ucinezele kwakhona ukuze ingatyibiliki.
Thenga intloko yendalo iphela
Olunye ukhetho olulungileyo. Sathenga enye intloko ehambelanayo okanye ehambelanayo ngomatshini wethu kwaye ngoku sinokusebenzisa naluphi na uhlobo lomsonto. Ezi ntlobo zeentloko zibiza phakathi kwe- € 5 kunye ne- € 15.
Ngale ndlela sinokutshintsha kuwo nawuphi na umsonto nangaliphi na ixesha esifuna ngalo. Ndiyithengile le nangona ndingakhange ndiyizame okwangoku
Kunye nentloko ndathenga i-3,5mm yocingo olukiweyo kwaye ndatyabeka ucingo lwentsimbi ukuvavanya ukuba lusebenza njani kuba ndicinga ukuba luya kunxiba kancinci.
Ndiyoyika ukuba ukuba yintsimbi ezinye iintlantsi ezingafunekiyo ziya kutsiba, kodwa xa ndizama ndiza kukuxelela.
Ngaba i-brushcutter yombane ifanelekile?
Lo ngumbuzo abantu abaninzi abawubuzayo endixelela ukuba ndithenge umbane.
Ndingathanda ukuyiphendula le nto kuba yinto endiyibuzwa rhoqo.
Impendulo njengesiqhelo kukuba ixhomekeke. Kuxhomekeka kwinto oyifunayo. Ndiza kuyisebenzisa kwicandelo lezikhukula ezi-2, apho ndinokudibanisa khona nezandiso ngaphandle kweengxaki. Ukugqiba kwam ndiyokugodusa emotweni ndiyokubeka ekamereni. Kwaye kuyancomeka ukuba ayingcoliswanga ngepetroli kunye neoyile, ayinavumba kwaye nangona ibonakala ngathi ayinangqondo, iyaqondakala into yokuba xa uyisebenzisa ayenzi ngxolo igqithileyo.
Kodwa kuya kufuneka uyazi into oyithengayo, kwimeko yolu hlobo oluthile (iBosch ASF 23 - 37) kuya kufuneka usoloko uqinisa ukhuseleko ukuze isebenze kwaye iba nzima. Kodwa abanye bagqibelele.
Ukuba ufuna umatshini onamandla aqhelekileyo, uza kuwusebenzisa kwindawo onokuyidibanisa ngaphandle kwengxaki kwaye ufuna into enengxolo encinci kwaye engangcolisi (ukuze ungangcolisi imoto okanye xa ndiyigcina ekhaya) Ewe, umbane lolona khetho lwakho lubalaseleyo.
Ukuba ufuna ukuyisa kwiindawo ezingenambane, ufuna amandla amaninzi, ngaphezulu kwe-1CV
Musa ukulumkela ipetroli kunye neoyile
Kufuneka ihlale ixhumekile kwaye ulahlekelwe yinkululeko
Awunakho ukuyisebenzisa ngaphandle kombane
Akukho modeli zinamandla njengakwipetroli
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ungandibuza kwizimvo kwaye ukuba ufuna ukuba bandise kwesi sihloko ndinokukwenza isikhokelo sokuthenga sebrashi.
Uyisebenzisa kanjani kwakhona ipaneli endala yelanga kunye nesilawuli sentlawulo
Iijenereyitha zoMbane: Imbali ye...
1 amagqabantshintshi «Ungazenza njani izinto ezincinci zomsonto wenayiloni zeBosch brushcutters»
Agasti 14, 2021 kwi-10: 53 am
Molo: Ndine-AFS 23-37 yokusika ibrashi kwaye ndikhangela into ehambelanayo nelayini yokubuyisela endiyifumeneyo kwiphepha lakho. Okokuqala enkosi ngokwabelana ngezimvo zakho. Ndingavuya ukuba unokuhlaziya ikhonkco elikhokelele kwintloko ehambelanayo; Kuyabonakala ukuba imveliso ayisafumaneki kwaye andazi ukuba ibhekisa kweyiphi na. Enkosi kwakhona.
1 Sebenzisa kwakhona i-bolt
2 Thenga intloko yendalo iphela
3 Ngaba i-brushcutter yombane ifanelekile?